OnePlus 5G dual-mode စမတ်ဖုန်းကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိမည် Androidsis
OnePlus 5G dual-mode စမတ်ဖုန်းကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောင်းချမည်
OnePlus မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည် OnePlus 7T နှင့် 7T Pro တို့ဖြစ်သည် တရုတ်ပြည်မှာ ဒီစမတ်ဖုန်းနှစ်ခုက 4G ကိုအထောက်အပံ့ပေးနေဆဲဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီက 5G လမ်းကြောင်းကိုမလိုက်ခဲ့ကြဘူး။ Plus အားတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Liu Zuohu ကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ထုတ်လုပ်သူမှ 5G dual-mode မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုထုတ်လုပ်မည်.
စမတ်ဖုန်းများတွင် 5G အထောက်အပံ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ OnePlus ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Liu Zuohu ကအင်တာဗျူးတွင်လာမည့်နှစ်၏ဒုတိယတစ်ဝက်မှာ 5G မိုဘိုင်းဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသည်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသော 5G နိုင်ငံများ။
Liu Zuohu က OnePlus သည်အထင်ကရမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုအဓိကထားပြီးအဆင့်မြင့်ဈေးကွက်တွင်နေရာယူထားဆဲဖြစ်ပြီး 5G ခေတ်သည်စျေးကွက်ရောင်းအားကိုဖမ်းယူရန်အတွက်နိမ့်နိမ့်သော 5G မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံမှာ 5G တယ်လီဖုန်းတွေစတင်မိတ်ဆက်တော့မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ် ယခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင် 5G SA နှင့် NSA dual mode ကိုထောက်ပံ့မည့်ဒုတိယမြောက် 5G မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိလာမည်.
အမှုဆောင်အရာရှိကထောက်ပြသည်မှာ 5G model အတွက် Qualcomm SM7250 ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်ဒါပေမယ့်ရယ်စရာကတော့မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းကပြောတာက၎င်းကို flagship အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် mid-range ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Zuohu ကဖုန်းကိုဘယ်အချိန်မှာဖြန့်ချိမလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်သူကဖော်ပြခဲ့သည် 2019 ၏စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်းဖြန့်ချိလိမ့်မည်ကျနော်တို့အထက်တွင်ထောက်ပြသကဲ့သို့, ။ ထိုအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ သိရှိလာကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များအပြင်စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OnePlus 5G dual-mode စမတ်ဖုန်းကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောင်းချမည်
Arena Allstars သည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် Battle Chess အနေဖြင့်ရယူလိုသည်